हिक्मत छ भने अब महाधिबेशन तर्फ अगाडि बढ् « Sansar News -->
हिक्मत छ भने अब महाधिबेशन तर्फ अगाडि बढ्
१७ असार २०७७, बुधबार १८:३६
साहास र हिक्मत छ भने अब महाधिबेशन तर्फ अगाडि बढ् । आम नेकपाका कार्यकर्ता नेता को कति पानीमा छौं भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर देखाउन तयार छन् । देश र जनताको माया छ भने वर्तमानका समस्यामा समाधान गर्ने गराउन पहल गर जनताको साथ रहने छ । एकले अर्कोलाई आरोप प्रतिआरोप लगाएर सत्ताको लागि केन्द्रीकृत छौ भने त्यसको परिणाम त्यति सहज र सरल रहने छैन । समयमै बुझेर देश र जनताको हितमा अगाडि बढन सबैमा हाम्रो अनुरोध छ ।
नेपालको राजनीतिक दाउपेच केबल आफू सत्तामा रहँदा ठिक अरुले सन्चालन गर्दा बेठिक । सहि र यथार्थको खोज भन्दा पनि भावना र कुन्ठामा कहिलेसम्म ? जहिले पनि देश र जनतालाई अन्धकारको भूमरीमा फसाएर आ–आफ्नै खैचडी कहिलेसम्म बजाई रहने हो ? बिगत देखि वर्तमानसम्ममा क–कसले के कस्तो भूमिका खेलेका छन्, के तिनीहरुको समीक्षा गर्ने पर्दैन ? आखिर सत्ता नै सबै हो भने । अहिले सम्मको त्याग, बलिदान आखिर किन ? अब समय आएको छ ठिक र बेठिकको समीक्षामा अब सबै जुटन पर्ने बेला आएको छ । त्यसको लागि सडकमा ताण्डप नाच्नै पर्देन ।
सन्जालमार्फत छलफल बहस सन्चालन गरेर देश र जनतालाई सचेत बनाउन सकिँदैन र रु आउनु होस् यथार्थ खोजौँ ।
हिजो संविधानसभा निर्वाचन अगाडि नेकपा एमाले (न भाले न पोथि) तथा ढुलमुले पार्टी नेकपा एमाले भन्दै प्रतिपक्षहरुले प्रहार र गिजाउँदै हिड्दा रुमालले मुख छोपी छोपी हिडने झलनाथ– माकुने बामेहरु, २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा काँग्रेससँग मिलेर आफै पत्तासाफ बनेर घुँडा घिस्रीघिस्री एकतामा आउने प्रचण्डहरु । अहिले के.पी ओलीले देखाएको एकता साहास राष्ट्रियताप्रतिको अडान अनि नागरिकताप्रति दुई बर्षे देखि अलपत्र विधेयकको निकाश र पार्टीको एकता अभुतपूर्व सफलतासहित सम्पन्न भएको हो ।
नेकपा भाले हो भनेर प्रमाणीत गरिदिएपछि चुनाव हारेका, केही पद नपाएर कुन्ठा पालेका, भ्रष्टाचारी र दलालीहरु हो, के.पी ओलीलाई एक्लो बनाउने योजना नगर । साहास र हिक्मत छ भने अब महाधिबेशन तर्फ अगाडि बढ् । आम नेकपाका कार्यकर्ता नेता को कति पानीमा छौं भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर देखाउन तयार छन् । देश र जनताको माया छ भने वर्तमानका समस्यामा समाधान गर्ने गराउन पहल गर जनताको साथ रहने छ । एकले अर्कोलाई आरोप प्रतिआरोप लगाएर सत्ताको लागि केन्द्रीकृत छौ भने त्यसको परिणाम त्यति सहज र सरल रहने छैन । समयमै बुझेर देश र जनताको हितमा अगाडि बढन सबैमा हाम्रो अनुरोध छ । केही कुन्ठा र पागलपन देखाउँदै युट्यूमा आफ्ना दूतहरुलाई नाँच्न नभन देश प्रवासले हेरिरहेको छ, तिमीहरुको खेल । तिमीहरुका कोठे बैठक र भेलाले तिमीहरुका सन्डमुन्डहरु यूट्यूवहरुमा नाँचेको नाँच कसैले देखेका छैनन् होला भन्ने नसोच । देश प्रवासका सारा जनताले हेरिरहेका छन् ।
समयमा संयम बनेर देश जनता र पार्टीको एकतामा आफूलाई खडा गर्नेुपर्ने र देशलाई यस महामारी, बेरोजगार र अर्थतन्त्रलाई कसरी संकटबाट जोगाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुको साटो कोहि सडकबाट ताण्डप नाँच नाँचिरहेका छन् त कोहि जनता भड्काउन अनेकौ तिकडम गर्ने पुगेका छन् । के सरकार परिवर्तन वा प्रधानमन्त्रीको परिवर्तनले देशको देखिएको अहिलेको समस्या समाधान गर्ने सक्दछ र ? पक्कै सक्दैन उल्टै देश अराजकतर्फ धकेल्ने बाहेक केही सकारात्मक देख्न सकिँदैन । अनि किन त यी खेल खेलिरहेका छन ? यी प्रश्नको जवाफ अहिले सबैका मन मनमा छन् । त्यसकारण यसबेला देशका सबै जनता राजनीतिक पार्टी, पक्ष, सत्तापक्ष एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन । यसको लिडरसिप वर्तमान सरकार र नेकपाले नै गर्ने पर्दछ । वर्तमान पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक यी माथिका बिषयमा केन्द्रीकृत बनेर समस्या समाधान तर्फमा सफलता मिलोस् हामी र हाम्रो यहि अपेक्षा गर्दछौं ।
तर्क विशलेषण र सम्प्रेषण समाज विकासको लागि अति महत्वपूर्ण तत्वहरु हुन् । सहि र यथार्थको खोजी नै बर्तमान र भविष्यका सन्तानको लागि मार्ग निर्देशन रहन्छ । तर्क कुर्तक, व्यक्तिगत गुठ स्वार्थले अन्तत जनता, देश समाजलाई नै पछाडी धकेल्छ । यसकारण सबैले यी बिषयमा सबैको ध्यान जाओस, चेतना भया ।